ပေါ့ဘာနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ အသင်းက “သူ့ကိုမခေါ်ပါဘူးဗျာ”လို့ ဒဲ့ငြင်းသွားတဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး – FBV SPORT NEWS
ပေါ့ဘာနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ အသင်းက “သူ့ကိုမခေါ်ပါဘူးဗျာ”လို့ ဒဲ့ငြင်းသွားတဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး
July 5, 2021 By admin Sports News
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းနဲ့ အနာဂါတ်မသေချာတော့တဲ့ပေါ့ဘာဟာ နာမည်ကြီးအသင်းတွေနဲ့ချည်းနာမည်ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ရာသီလုံးလောက်မှာ တစ်ရာသီလုံးလောက်သာ အသင်းပြောင်းဖို့ ဂယက်ထနေတဲ့ပေါ့ဘာဟာ ဒီနှစ်မှာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းဆီက တစ်ပတ်လုပ်ခလစာပေါင် ၅သိန်းလောက်ရချင်နေတာပါ
ဒါပေမယ့်လည်း ယူနိက်တက်ဟာ ပေါ့ဘာကို ယူနိက်တက်ရဲ့ စံချိန်တင်လစာပေါင် ၄သိန်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။
ပေါ့ဘာအကိုကတော့ ပေါ့ဘာဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကိုမျက်စိကျနေတယ်လို့ပြောထားပေမယ့် ပီအက်စ်ဂျီဂျူဗင် ရီးရဲလ်စတဲ့အသင်းပေါင်းစုံနဲ့လည်းနာမည်ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုနာမည်ကြီးနေချိန်မှာပေါ့ဘာဟာလည်း ပြင်သစ်အသင်းမှာ ယူနိက်တက်ကပေါ့ဘာလားမေးရအောင်ခြေစွမ်းကောင်းတွေပြခဲ့ပြီးမှယူရိုကထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
ခုခါမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှ နာမည်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဂျူဗင်အသင်းရဲ့Former Directorဖြစ်တဲ့ Fabio Paratici ကတော့ပေါ့ဘာဟာ စီးရီးအေချန်ပီယံရဲ့နောက်တစ်ဖန်လက်မှတ်ထိုးပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှနီးစပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတိအလင်းပြောချလိုက်ပါတယ်။
အသက်၂၈နစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပေါ့ဘာဟာ ၂၀၁၂ခုနစ်မှာ အိုးထရက်ဖိုစ့်ကနေဂျူဗင်ကိုပြောင်းရွေ့ပီး ၂၀၁၆ခုနှစ်ထိဂျူဗင်မှာကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
” ပေါ့ဘာကို ဂျူဗင်ကိုပြန်လာမယ်ဟုတ်လား? ဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဂျူဗင်ကပြန်ခေါ်မယ်မထင်သလိုသူကလည်းပြန်လာဖို့ဆိုတာခဲယဉ်းပါတယ်”လို့ လက်ရှိစပါးအသင်းမှာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာလုပ်နေတဲ့Fabio Paratici ကSky Sportကိုဆိုပါတယ်။ အရင်ကတော့ ဂျူဗင်မှာ အားကစားဒါရိုက်တာလုပ်ခဲ့သူပေါ့။
“သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာဖို့တွေးခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဗျ”လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ယူရို၂၀၂၀မှာ ဘယ်လိုကစားသမားမျိုးဆိုတာပြခဲ့တဲ့ပေါ့ဘာဟာ ဆွစ်ဇာလန်ကိုရှုံးပြီးနောက် ယူရိုဖလားကိုကိုင်မြောက်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါပြီ။
ပေါ့ဘာဟာ ယူနိက်တက်အသင်းမှာဆက်ရှိနေဖို့အတွက် ယူနိက်တက်ဘက်က အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပေမယ့်လည်း အဓိကပြဿနာက ပေါ့ဘာအေးဂျင့်ရွိင်းအိုလာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ပေါ့ဘာဟာ ယူနိက်တက်မှာဆက်ရှိမလား ဂျူဗင်ပဲရောက်မလား ရီးရဲလ်ပဲရောက်မလားဆိုတာတော့ အပြောင်းအရွေ့ပုံပြင်ဈေးကွက် ကြီးကိုပဲဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မန်ဖန်တွေရော ပေါ့ဘာကိုယူနိက်တက်မှာဆက်ရှိနေစေချင်လား? ဘယ်အသင်းကိုသွားစေချင်လဲ?
ဆာကာကို သားတစ်ယောက်လို ချစ်ရတယ် ဆိုပြီး လုရှော ဘာကြောင့် ပြောလိုက်လဲ?